Ikhaya Elizimele Eliyingqayizivele Kude Nekhaya - I-Airbnb
Ikhaya Elizimele Eliyingqayizivele Kude Nekhaya
U-Rebecca uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-94% wezivakashi zakamuva.
Itholakala endaweni Emlando yase-Byron, lesi sikhala sinokuzwakala okuphakeme futhi izinga eliphansi leyunithi enkulu yokufinyelela exhunywe umoya ohelezayo oya endlini yasepulazini yama-1860s. Ifakwe ngezinto zakudala futhi inomoya othokomele, ophumuzayo. I-landscape inomuzwa we-tropical. Itholakala kuphela imizuzu emi-5 ukusuka ku-I-75. Kukhona imali yesilwane esifuywayo, kodwa iyahlukahluka ngobude besikhathi sokuhlala kanye nokuthi zingaki izilwane ezifuywayo. Ngicela ungithinte ukuze uthole amanani.
Izinto zakudala ezisetshenziselwa ukuhlobisa lesi sikhala zisenza sihluke kakhulu! Njengesiqhingi ekhishini, ikhabethe lasekhishini elicoceke ngempela nokunye okuningi! Itholakala endaweni eyingqophamlando yase-Byron, GA futhi kukhona amakhaya amaningana amadala endaweni kanye neDepho endala. Futhi, isitolo sezidakamizwa esidala manje sekuyi-Drugstore Deli futhi siyindawo enhle yokudla kwasemini. I-Robins AFB iqhele ngamamayela angu-20 kuphela.
Omakhelwane banobungane kakhulu! Futhi ngiyathanda nje ukuthi le ndawo inomlando omningi.
Uma udinga unemibuzo noma udinga okuthile, ungashayela/uthumele i-SMS kumakhalekhukhwini wami: 478-955-6369. Uma ungakwazi ukungithola kule nombolo, ungashayela umsizi wami ku-478-955-6374. I-imeyili yinhle futhi: onhowardst@gmail.com.